Satria hoy i Google | Martech Zone
Satria hoy i Google
Alarobia, Febroary 27, 2013 Alarobia, Febroary 27, 2013 Douglas Karr
Google no tompony. Fe-potoana. Tsy azontsika ialana izany. Raha te handray soa amin'ny fikarohana biolojika ianao, dia tsotra ny formule SEO - henoy fotsiny izay tian'ny Google hataonao ary ataovy! (Ary aza manao tahaka ny fanaon'izy ireo)
Niverina indray izany tamin'ity herinandro ity. Nisy solontena iray avy amin'ny departemantan'ny tranonkala nanala ny fanairana tao amin'ny Webmasters sy ny fitomboan'ny lesoka rehefa dikany. Amin'ny maha mpanolo-tsaina azy ireo dia angatahina aho hiaro, amin'ny isa, ny antony ilàn'izy ireo manamboatra ireo olana ireo. Ny fahafantarana fa ny fampandrosoana ilaina dia tena mavesatra ary misy vidiny lafo amin'ny fanitsiana ireo olana, ity ny valinteniko:
Satria hoy i Google.
Fa maninona no tsy maintsy lasa lavitra ny resaka? Enga anie mba ho fantatro ny algorithm farany ary azoko atao ny manisa ny fiovana amin'ny tranokala, ny fifaninanana, ny lazan'ny atiny ary manome kajy faran'izay voafetra hanomezana tombana amin'ny tombam-bidiny. Tsy haiko ny algorithm. Tsy afaka manome izany porofo izany aho. Ny hany azoko lazaina aminao dia:
Antsoina izany Optimization. Ny fanatsarana dia dingana mitohy izay tsy maintsy arahiako ny fampahalalana rehetra omen'i Google, hanombatombana ny tranokalanao araka ny fenitra omeny anao, ary hanome anao lisitra fanamarinana sy laharam-pahamehana hanitsiana anao. Isan'andro, Google dia manome fahitana bebe kokoa momba ny fomba tian'izy ireo hanehoana atiny hahasarika ny laharan'ny fikarohana.
Azontsika atao ny mametraka laharam-pahamehana amin'ny valin'ny fikarohana sasany nataon'ny mpitarika SEO hafa manerana ny tranonkala sy amin'ny alàlan'ny traikefa amin'ny mpanjifanay manokana. Saingy ao anatin'io lisitra io dia tsy afaka milaza aminao aho hoe inona ny fiantraikan'ny tsirairay amin'ireo fanovana ireo amin'ny ankapobeny amin'ny filahanao. Raha misy olona milaza aminao fa mahalala… mandainga izy ireo.
Ohatra farany izay advertorial afa-po. Ity herinandro ity, Nampahatsiahy ny rehetra i Google fa raha manonitra olona amin'ny famoahana ny atiny ianao - miaraka amina rohy manaraka - fandikana ny fe-potoam-piasan'izy ireo izany.
Tsy hiady hevitra amin'ny mpanjifa aho momba ny fizotr'izy ireo mba hahazoana izany atiny… na ny nuansa na tsia ny mpitoraka bilaogy sendra nisy rohy tao… saingy tsy voaloa ny rohy fa ny atiny fotsiny. Fantatro fa tsara laharana izy ireo ary mitarika orinasa betsaka io laharana io. Saingy mbola manoro hevitra azy ireo aho mba hijanona.
Raha tsy tsara laharana ianao ary tsy mandray hafatra avy amin'ny Google momba ny tranokalanao, lesoka hita ao amin'ny Webmasters, na mandoa atiny advertorial ianao… ajanony izany.
Tags: atiny advertorialgoogle webmasterGoogle +Optimizationfikarohana biolojikafikarohanaSEO
Lazy Load Social Buttons miaraka amin'ny Socialite.js
28 Feb 2013 tamin'ny 12:46 maraina
Lahatsoratra bilaogy tsara Doug! Nampahatsiahy ahy ny fifandraisan'ny ray aman-dreny sy ny zaza i Kinda. “Mandehana diovy ny efitranonao zandriny!” "Nahoana?" Satria nolazaiko taminareo izany! Izaho dia eo am-pifanakalozan-kevitra miaraka amin'ny mpanjifa iray izay mieritreritra fa tokony ho afaka hanangana ny tranonkalany vaovao amin'ny alatsinainy maraina izy ireo ary avy eo amin'ny alatsinainy tolakandro amin'io andro io ihany dia manantena ny Google hifidy izay hetahetany. Nohazavaiko tamin'izy ireo fa aorian'ny fampidirana ireo fanao SEO tsara indrindra ao amin'ny tranonkalany dia miankina amin'ny Google tsitoha ihany ny mamaly. Tsy miandry antsika i Google fa miandry amin'ny Google izahay. Tsy nahazo ilay mpanjifako ary tsy nahazo. Tian'izy ireo izay rehetra atolotry ny Google amin'ny fikarohana eo an-toerana ANAO! Ny fahatsapana, "Tonga soa ireo miandry" ny zavatra tsara "dia tsy misy ifandraisany amin'ny tompona orinasa kely izay maniry ny pejy voalohany an'ny Google tadiavina.
Mar 15, 2013 amin'ny 1: 05 AM
Izao dia zavatra tsara sasany eo! Saika mila ny sehatra misy azy io miaraka amin'io atiny io ihany. Fantatrao toy ny "avelao aho Google ho anao". Brilliant!